Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Sidina avy any Almaty mankany New Delhi amin'ny Air Astana izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana India • Vaovao Mafana Kazakhstan • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Air Astana dia manolotra fifandraisana ho an'ny mpandeha mandeha avy any Kyiv, Bishkek, Istanbul, Tbilisi ary Baku.
Ny Air Astana dia hanohy ny sidina avy any Almaty mankany New Delhi, renivohitr'i India, tamin'ny 16 Desambra 2021, miaraka amin'ny serivisy telo isan-kerinandro ataon'ny fiaramanidina Airbus A320.
Ny fiaingana avy any Almaty ny Talata, Alakamisy ary Sabotsy dia voalahatra amin'ny 07:50 ary tonga any New Delhi amin'ny 11:10, miaraka amin'ny sidina miverina amin'ny 12:20 ary tonga any Almaty amin'ny 16:40. Ny fotoana rehetra eo an-toerana, miaraka amin'ny fotoana sidina 3 ora sy 50 minitra isaky ny lalana.
Air Astana manome fifandraisana mora ho an'ny mpandeha mandeha avy any Kyiv, Bishkek, Istanbul, Tbilisi ary Baku.
Fampahalalana momba ny dia / Fepetra fidirana
Ny mpandeha rehetra mandeha mankany New Delhi ao anatin'izany ny ankizy dia mila mameno ny endrika an-tserasera amin'ny seranam-piaramanidina New Delhi. Ireo mpandeha mihoatra ny 5 taona dia mila mampakatra ny valin'ny fitiliana PCR misy valiny ratsy azo ao anatin'ny 72 ora alohan'ny hahatongavana. Alohan'ny hiondranana amin'ny fiaingana sy aorian'ny fahatongavana, ny mpandeha dia hanao fitiliana thermometric. Raha misy soritr'aretina coronavirus hita dia halefa any amin'ny tobim-pitsaboana ny mpandeha.
Ny mpandeha tsy vita vaksiny na tapany dia tsy maintsy manao fitiliana COVID-19 rehefa tonga ary mamerina izany amin'ny fiafaran'ny vanim-potoana fijanonana ao an-trano mandritra ny fito andro. Ireo mpandeha vita vaksiny tanteraka dia tsy afaka manao fitiliana PCR rehefa tonga sy avy ao an-trano.